Dhawunirodha: Iyo Yakajeka & Yakazara Nongedzo Kune Akaunti-Yakavakirwa Chiitiko (ABX) | Martech Zone
Demandbase iri kushandura nzira iyo makambani eB2B anoenda-kumusika. Demandbase Imwe ndiyo yakazara zvakakwana B2B kuenda-kumusika mhinduro, kubatanidza inotungamira account-yakavakirwa ruzivo, kushambadzira, ungwaru hwekutengesa, uye B2B dhata mhinduro kuitira kuti Kushambadzira uye Kutengesa zvikwata kumakambani makuru uye anokurumidza kukura anogona kubatana nekukurumidza, kugoverana njere, uye kuona kukura kukuru.
Chief Marketing Officer, Jon Miller, rakanyora uye rikaburitsa iri rakanaka ebook idzva pane shanduko yeAccount-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM) ... Akaundi-Yakavakirwa Chiitiko (ABX).
Chii Akaundi-Yakavakirwa Chiitiko (ABX)?
Icho chakakosha, mutengi-centric kufungisisa kweakaundi-yakavakirwa kuenda-kumusika - iyo inosanganisa kubatika kwekushambadzira kwakawanda pamwe nekujeka uye kunongedza kweAccount-Yakavakirwa Kushambadzira. ABX inovandudza zvese zvechiitiko chemutengi mukati meB2B lifecycle uye zvinoshamisa zvinoshamisa kunze kweiyo yakapusa ABM uye yechinyakare inoda gen. ABX ndiyo chaiyo shanduko yeAccount-Yakavakirwa Kushambadzira.
Kushambadzira kwemazuva ano kweB2B kuri pamusoro pekusimudzira zvese zvechiitiko chemutengi, mukati mehupenyu hweB2B, uye kunze-kuita zvakapusa ABM uye yechinyakare kudiwa gen. Inguva yekushanduka kunotevera muB2B kuenda-kumusika maratidziro. Hatigone kuramba tichiita zvakafanana zvinhu uye kutarisira mhedzisiro dzakasiyana.
Neraki, modhi nyowani, maitiro matsva, uye hunyanzvi hwetekinoroji - inotungamirwa neAI uye hombe dhata - yakabuda kuratidza nzira iri nani kumberi kwekambani yega yega yeB2B: Akaundi-Yakavakirwa Chiitiko. Heano ako epamutemo, akazara gwara rekushandisa mutengi-centric uye account-based lens kuB2B kuenda-kumusika zano. Yakabatanidzwa mugwaro:
Nei Akaundi-Yakavakirwa Chiitiko?
Iwo mashanu ABX Maitiro
Vaka yako account account data
Tsvaga maakaunzi akakosha
Shingairira (Nzwisisa, Gadzirisa, Shambadza, Bata, uye Orchestrate)
Vhara mikana nekuenzanisa Kushambadzira uye Kutengesa
Edza kufambira mberi kweakaundi
Iyo ebook inosanganisirawo ruzivo rwekuvaka yako yese-nyeredzi ABM timu, maitiro ekuona mabhajeti, uye inosanganisira mamwe mapepa ekushandira kuti utange.
Dhawunirodha Iyo Yakajeka & Yakakwana Gwaro Kune Akaunti-Yakavakirwa Chiitiko (ABX)
Tags: abmabm kushambadziraabm bhajetiabm ebookabm kubatanidzwaabm kuitiswaabm orchestrationmazano eabmabxnzendo dzeakaunzinhoroondo-yakavakirwa ruzivoaccount-based kushambadziraaibig datademandbasedownloadeBookkubatikanafree download
Iyo Wall Printer: Iyo Vertical Printing Solution Kune Yemukati kana Ekunze Masvingo